September 23, 2017 - Page2of 8 - TV Annapurna
विपीको योगदानले मुलुक सार्वभौम : नेता पौडेल
September 23, 2017 Annapurna TV
तनहुँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विपी कोइरालाको योगदानका कारण मुलुक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बन्न सकेको बताउनुभएको छ । नेपाल दलित संघ, व्यास–१ नं वडा कार्यसमितिको आयोजनामा शनिबार बिहान विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा नेता पौडेलले राष्ट्रिय राजनीतिक चेतनाले देश एकीकरण गर्ने नेकाका संस्थापक नेता महामानव विपी कोइरालाकै योगदानले देश अहिलेको अवस्थामा अघि बढेको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा नेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई देशको भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि बढाएर लैजान नेका तनहुँले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा लड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा…
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सञ्चारकर्मीको योगदान महत्वपूर्ण : उपप्रम श्रेष्ठ
पोखरा । उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ‘दयाशंकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’बाट पोखराका पत्रकार पुण्य पौडेललाई सम्मान गर्दै उहाँले पत्रकारहरुकै योगदानबाट मुलुकमा हालसम्मका उपलब्धि प्राप्त भएको बताउनुभयो । सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले पत्रकारका हकहित तथा पेशागत सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । गुणस्तरीय शिक्षा वर्तमानको आवश्यकता भएकोमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारमूलक एवम् व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट स्वदेशमै युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिने बताउनुभयो । उक्त…
बझाङ । बझाङको बंगल नगरपालिका–३ दहबगरबाट कैलालीको सहजपुरतर्फ लैजादै गरेको से १ ज १७५० नं. को जिपबाट प्रहरीले आज एक केजी पचास ग्राम लागुऔषध चरेश बरामद गरेको छ । जिप चालकको सिट मुनि लुकाइराखेको अवस्थामा अस्थायी प्रहरी पोष्ट, बिजगडाको प्रहरी टोलीले चरेश बरामद गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले बताउनुभयो । चरेशसहित कैलाली जिल्ला चुरे गाउँपालिका–१ का जिप चालक संगम आचार्यलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ । .
अपरेसन एनआरएनए , नेतृत्वको दौडधुप र शेष घलेको गोप्य योजना
September 23, 2017 October 12, 2017 TV-Annapurna
केही दिनदेखी विश्वभरका नेपाली समुदायबीच गैर आवासीय नेपाली संगठन एनआरएनको आठौं विश्वसम्मेलनको सरगर्मी बढेको छ । झण्डै ६ दर्जन बढि देशहरुमा संगठन बिस्तार गरेको एनआरएनको काठमाण्डौमा हुने विश्वसम्मेलनले आगामी २ बर्षका लागी नयाँ नेतृत्व चुन्ने भएकाले धेरै ध्यान तानेको छ । हायत होटलमा असोज २७ देखी ३१ गतेसम्म हुने बिश्व सम्मेलनका लागी विश्वभर छरिएर रहेका १५ सय एनआरएनहरुको सहभागिता हुनेछ । हरेक २ वर्षमा हुने सम्मेलनजस्तै यो बर्षपनि धेरैको ध्यान गैह आवसीय नेपाली संघको आगामी नेतृत्व कसको पोल्टामा जाने भन्नेमा केन्द्रित छ । एनआरएनका सस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको आर्दशमा…
प्रवास / विश्व1 Comment
मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने समानुपातिकतर्फको मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार मतपत्रको एउटै सिटको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्धारण गरिएका राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह रहनेछन् । सोही सिटको तल्लो भागमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन चिन्हहरू रहने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्दा मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो हुने र निर्धारित समयमा छपाइलगायतको व्यवस्थापन गर्न सरल होस् भन्ने पक्षलाई…
September 23, 2017 September 23, 2017 Annapurna TV
संयुक्त राज्य अमेरिका । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ उनबीच पछिल्लो समय भइरहेका भनाभन ‘बच्चाहरुको झगडा जस्तै’ भएको बताउनु भएको छ । ट्रम्प र किमबीच एक अर्कालाई होच्याउने वा नजरअन्दाज गर्ने खालका अभिव्यक्तिको आदान प्रदानलाई लिएर रसियाली विदेशमन्त्री लाभरोभ उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले केही दिन पहिले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उत्तर कोरियालाई पूरै ध्वस्त पारिदिने अमेरिकाको क्षमता रहेको बताएपछि किमले ट्रम्पलाई ‘दिमागी हालत ठीक नभएको गुण्डा’ भन्नुभएको थियो । यसको प्रतिक्रियामा ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किमलाई शुक्रबार ‘एकजना…
एकसय नौ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक
काठमाडौँ । असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमध्ये १०९ वटा स्थानीय तहको मतगणनाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) बाट आज अपराह्न ४ बजे प्राप्त विवरण अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष पदमा नेपाली काँग्रेस ३३, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल २०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १९, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १८, नेकपा (एमाले) १३, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तीन, नेपाली जनता दल दुई र नयाँ शक्ति नेपालका एक उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ । यसैगरी, अहिलेसम्म एक हजार…
Breaking News : बाग्लुङमा एउटै जीप २ पटक दुर्घटना हरेक पटक दुई दुई जनाको मृत्यु
बाग्लुङ । बाग्लुङको दक्षिणी भेग बरेङमा जिप दुर्घटना हुदाँ दुईजनाको ज्यान गएको छ । बाग्लुङबाट बरेङका लागी छुटेको ध १ ज १३४ नम्बरको जीप दुर्घटना दिउसो ३ बजे बरेङको बाराकोटमा दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा दुई प्रहरीको मृत्यु भएको छ । गएको चैतमा पनि बरेङमै सोही जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाकै मृत्यु भएको थियो । आज भएको दुर्घटनाबारे प्रहरी कार्यालय बागलुङको दिएको जानकारी अनुसार उक्त जीप सदरमुकाम देखी बरेङ तर्फ प्रहरीलाई लिएर गएको थियो । दुर्घटनामा प्रहरी हवल्दार खीमबहादुर विष्ट जवान ढालबहादुर श्रीसको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बरेङ गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण शर्माले…
जिराभवानी गाउँपालिकामा एमाले विजयी
पर्सा । पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले जितेको छ । एमाले उम्मेदवार रामप्रित महतोले अध्यक्षमा विजयी भएका छन् भने उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै उषादेवी थरुनी विजयी भएकी छन् । पर्सामा एमालेको यो दोस्रो जित हो । जिल्लाको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा एमालेले जित हात पारेको थियो ।
बोदेवर्साइनमा प्रमुख र उपप्रमुखमा संघीय फोरम, छिन्नमस्ताको अध्यक्षमा नयाँ शक्ति
राजविराज । सप्तरीको बोदेवर्साइन नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल विजयी भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका आतिश सिंह यादवले चार हजार ५४७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राजपा नेपालका अमरेन्द्र यादवले तीन हजार २९८ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपप्रमुखमा संघीय फोरम नेपालकै रञ्जु साह निर्वाचित हुनुभएको छ । साहले तीन हजार ७२१ मत प्राप्त गरी राजपा नेपाललाई पराजित गर्नुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राजपाका उपप्रमुख उम्मेदवार रेणु साहले तीन हजार ६३७ मत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ । छिन्नमस्ताको अध्यक्षमा नयाँ शक्ति…